Sidee ayay u muuqanaysaa SHAXDA Kooxda Manchester United marka lagu daro Bruno Fernandes iyo Soumare? – Gool FM
Sidee ayay u muuqanaysaa SHAXDA Kooxda Manchester United marka lagu daro Bruno Fernandes iyo Soumare?
Haaruun January 15, 2020
(Manchester) 15 Jan 2020. Kooxda Manchester United ayaa si weyn ugu jirta suuqa kala iibsiga xiddigaha bishaan Janaayo, iyagoo isha ku haya inay soo xero galiyaan xiddigo muhiim u noqon kara safkooda inta ka dhimman xilli ciyaareedkan.
Solskjaer ayaa lagu soo waramayaa inuu aamisan yahay inay kooxdiisa ay sameyn doonto lix saxiix labada suuq ee soo aaddan si loo xaliyo dhibaatada kooxda Old Trafford, laga bilaabo bishaan.
Magacyo badan ayaa ku jira liiskan, laakiin sida la rumeysan yahay saxiixooda ugu horreeya waxa ay u muuqataa inuu yahay Bruno Fernandes kaas oo kasoo dhaqaaqi doona Naadiga Sporting Lisbon.
Boubakary Soumare oo ka tirsan Lille OSC ayaa sidoo kale la la xiriirinayaa kooxda ka dhisan Old Trafford, kaasoo la la barbardhigo Paul Pogba.
Haddana su’aasha la is-weydiinayo ayaa ah sida ay noqon doonto shaxda kooxda Manchester United, marka kooxda lagu soo daro dhowr xiddig oo tayo leh, sidoo kalena kooxdu ay sii haysto laacibiinteeda tayada wanaagsan leh.
Labda xiddig ee ugu halista badan ee shaxda ka soo muuqanaya waa Boubakary Soumare iyo Bruno Fernandes, kuwaasoo la fahamsan yahay inay ku soo biiri doonaan Kooxda Manchester United.
Haddaba halkaan hoose ka eeg sida ay u muuqanayso shaxda kooxda Man United marka lagu daro Boubakary Soumare iyo Bruno Fernandes waxaana soo bandhigtay talkSPORT:-
Kooxda Manchester City oo ka soo jawaabtay dalabkii ay Arsenal ku doonaysay John Stones
Xiddig muhiim ah oo maanta ka maqnaan doona Kooxdiisa Dekedda kulanka ay wajahayso Rajo FC